Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Waa maxay qasabada jikada ugu caansan?
2020 / 10 / 03 QoondayntaTilmaamaha qasabada 12286 0
Markaan fiiro gaar ah siineyno naqshadeynta goobta lagu noolaado, tubbada musqusha ma ahan mid dhexdhexaad u ah biyaha, laakiin waa taabashada ugu badan ee naqshada musqusha.
Hadda oo ay gashay xilligii qurxinta, WOWOW waxay soo koobtay naqshaddii ugu dambaysay ee naqshadeynta iyo isbeddellada teknolojiyadda sannadkan, si aanad dib uga dhicin gadaal markaad wax iibsanayso.
// Tilmaame cusub oo midab caan ah //
Midabka sanadkaan caanka ah ee "Tender Grass Green" oo ay sii deysay hay'ada midabka aduunka ee pantone ayaa ah midab aad ugu haboon guga wuxuuna soo bandhigayaa bilow cusub oo rajo leh.
Si ka duwan budada quartz ee sanadkii hore iyo buluug xasilloon oo dadka u keenay dareen nabadeed iyo xasillooni, cowska cagaaran ee sanadkaan ayaa kicinaya dadka u hanqaltaaga deegaanka dabiiciga ah, wax walbana waa ay kobcayaan
Sidaa darteed, Sussex waxay soo saartay taxane ah caagag cagaaran iyo waxyaabaha qubeyska si ay ula socdaan isbeddelladan. Dad badan ayaan dhigi doonin midabbo qurxoon qolka musqusha. Si kastaba ha noqotee, xulashada hal shey oo leh midab boodbood leh ayaa runtii ka dhigi kara booska mid xiiso leh.
Marka lagu daro midabka caanka ah iyo cawska cagaaran, Sueesx waxyaabaha ay soo saaraan sidoo kale waxay leeyihiin ikhtiyaarro badan oo midab leh. Astaantu waxay aaminsan tahay in midabada midabada leh ay dhab ahaantii yihiin isbeddel weyn oo ku saabsan naqshadaynta musqusha. Haddii aad rabto inaad la qabsato moodada, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa alaabooyinka musqusha midabadan leh.
// Birta iyo naxaasta wali waa caan //
Dahabka dahabka iyo naxaasku waa isbeddello caan ah oo soconayay illaa sanadkii hore, runtiina waxay ka buuxaan qaab-dhismeed. Si kastaba ha noqotee, si ka duwan midabkii sanadkii hore, halbeegga birta ee sanadkan wuxuu xooga saarayaa isku darka iyo isku midabeynta midabada ama walxaha, oo loo qaadan karo inay tahay naqshad casri ah.
Marka lagu daro dahabka midabada kacay iyo midabada naxaasta ah, matoorka madow, qalinka iyo cawl madow ayaa si tartiib tartiib ah caan u ah, ha ahaadeen kali ama isku dar, waa kuwo aad moodo oo indhaha soo jiita.
// Jihada iyo qaab dhismeedka socodka biyaha //
Tuubada ay soo saartay Hansgrohe xariiqdeeda dhamaadka-sare Axor waxay u dhigantaa jihada socodka cuf isjiidadka, iyo xagalka marin biyoodka ee sida gaarka ah loo qorsheeyay wuxuu hubiyaa in biyuhu si dabiici ah u socdaan, taasoo u oggolaaneysa taabashada maqaarku inuu galo socodka dabiiciga ah ee biyaha dabiiciga ah cadaadis la'aan.
Muraayadda, dhagaxa iyo birta ayaa dhammaantood ah qalab cusub oo ah alaabooyinka cusub ee qasriga ee Axor sannadkan, iyagoo keenaya khibrad muuqaal oo ka duwan tii hore.
// Nidaamka cusub ee hidda-shidaalka //
Iyada oo caan ku ah qaababka naqshadeynta guryaha warshadaha, naqshadaha alaabada guryaha badankood waxay u muuqdaan kuwo warshadeysan. Tuubada loogu talagalay Adriano Design ee loogu talagalay astaanta Talyaaniga ee Verum waa wakiil caadi ah.
Tuubadaani waxay sidoo kale ku guuleysatay Abaalmarinta Naqshadeynta Jarmalka ee 2017 naqshadeynta cusub iyo teknolojiyadda.
Tuubadan loogu magacdaray Dueacca waxay ku saleysan tahay xabbad bir ah oo nidaamsan, laakiin fikradda nidaamka haydhka ayaa dib loogu tarjumay gudaha.
Qulqulka biyaha ayaa si siman ugu socon kara nidaamka haydiga ee tuubada tuubada. Xitaa haddii dhuumaha dhaadheer ay u baahan yihiin in lagu ballaariyo banaanka, waxay xaqiijin kartaa in qulqulka biyuhu uusan yareyn, taasoo sababi doonta qashinka ilaha biyaha.
// Qalabka hal-abuurka ah wuxuu kordhiyaa ku habboonaanta isticmaalka //
Tuubadan Zurich sidoo kale waa badeecad ku guuleysatay Abaalmarinta Dhibcaha Cas. Waxay isticmaashaa tuubada walxaha isku dhafan oo lagu daray naqshad tuubbo bir ah oo adag, xagasha socodka biyahana waa la beddeli karaa wakhti kasta iyadoo loo eegayo baahida isticmaalka, taas oo aad ugu habboon in la isticmaalo.
Waxa kale oo jira midabbo badan oo loogu talagalay tuubada synthetic ee laga kala xusho, sidaa darteed tuubbada biyaha lagu dhaqaaqo ee xorriyadda ahi waxay u keentaa raaxo iyo raaxo badan nolosha musqusha.
Hore:: Sida Loo Xulo Qalabyada Maydhashada Cusub Next: Ma qasabadaha Hal-qabsi Keli ah ayaa Ka Fiican?
2021 / 02 / 04 16826
2021 / 02 / 03 16440
2021 / 02 / 03 12449
2021 / 01 / 28 12214
2021 / 01 / 28 18405